Lalan'i St Brigid - IntoKildare
Ny St Brigid's Trail dia manaraka ny dian'ny iray amin'ireo olo-masina malalantsika indrindra namakivaky ny tanànan'i Kildare izay ahafahan'ny mpandehandeha mizaha io lalana mitana ny angano io mba hahitana ny lova navelan'i St Brigid.
Manomboka amin'ny Kildare Heritage Center eo amin'ny Market Square, ny mpitsidika dia afaka mijery fampisehoana an-tsary an'i St Brigid sy ny fifandraisany amin'ilay tanàna alohan'ny hanohizany mankany amin'ny Katedraly St Brigid ?? sy ny fiangonana St Brigid ?? izay nosokafan'i Daniel O ?? Connell tamin'ny 1833.
Ny fijanonana lehibe amin'ny làlana dia Ivotoerana Solas Bhride ?? foibe namboarina ho an'ny lova ara-panahy an'ny St Brigid. Eto ireo mpitsidika dia afaka mizaha ny tantaran'i St. Brigid sy ny sanganasany any Kildare. Solas Bhride dia mitazona fankalazana Feile Bhride (Fetin'ny Brigid) mandritra ny herinandro ao an-tanànan'i Kildare isan-taona ary amin'ity taona ity dia hatao saika ny hetsika.
Ny toerana farany amin'ny fitsangatsanganana dia ny Lavaran'i St Brigid ?? eo amin'ny Lalan'i Tully, izay ahafahan'ny mpitsidika mankafy ora milamina ao amin'ny orinasan-drano malaza indrindra ao Kildare.
Ho an'ny sarintany sy fampahalalana bebe kokoa, kitiho eto.
Ny tantaran'ny St Brigid
St Brigid dia nanangana monasitera ho an'ny lahy sy ny vavy tao Kildare tamin'ny 470AD tamin'ny fangatahana ny Mpanjakan'i Leinster ho an'ny tany sasany. Ny hanomezana an'i St Brigid ny velaran-tany azon'ny lambam-paty ao an-damosiny ihany, milaza ilay angano fa nisy fahagagana nanenjana ilay akanjo lava handrakofana ny tany lemaka Kildare manontolo Curragh. Ny andron'i St Brigid dia nanamarika ny andro voalohan'ny Lohataona tao amin'ny hemisphere avaratra ary nankalazain'ny Kristiana eran'izao tontolo izao nandritra ny taonjato maro.
Ireo misiônera irlandey sy mpifindra monina dia nitondra ny anarany sy ny fanahiny nanerana an'izao tontolo izao. Androany, mpivahiny sy mpitsidika dia tonga any Kildare manerana an'izao tontolo izao mitady ny handeha amin'ny dian-tongotr'i Brigid.
Lova sy tantara, Outdoors, Mandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra, lalana, Zavatra maimaim-poana hatao, Atsinanana Fahiny any Irlandy, Kildare
Kianjan'ny tsena, Kildare, County Kildare, Irlandy.